शिशिर भण्डारीलाई श्रीमतीले किन यसरी उठ-बस गराईन त ? यो रमाईलो भिडियो (भिडियो सहित) – Ap Nepal
शिशिर भण्डारीलाई श्रीमतीले किन यसरी उठ-बस गराईन त ? यो रमाईलो भिडियो (भिडियो सहित)
May 14, 2021 571
लक`डाउनको समय छ, केहि मनोरन्जनात्मक सामग्री`हरु प्रस्तुत गर्ने युटुबरहरु यो समयमा बिभिन्न रमाईलो बिषय`वस्तु प्रस्तुत गरी दर्शकहरुलाई रमाईलो गराउँद`छन् ।
यसैबिच युटुबमा शिशिर भण्डारी`ले आफ्नो श्रीमतीको अगाडी उठबस गरेको भिडियो बाहि`रिएको छ । शिशिरले श्रीमतीको रमाईलो युटुब च्यानलका लागि खिचि`एको एउटा भिडियोमा श्रीमतीको अघि उठ`बस गरेका हुन् । भिडि`यो निकै रमाईलो छ ।
नेपाली भि`डियो क्रि`यटर्स नामक युटुबमा शिशिर र उनको श्रमिती रमाईला सामग्रीहरु बनाउँछन् । त्यसो त शिशिर आफ्नो २० लाख हाराहारी सव्सक्रा`ईभर्स भएको च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल`बाट सामा`जिक तथा साँगीतिक कामहरु र अन्य अन्त`र्वार्ता सामग्रीहरु प्रस्तु गर्दै आईरहेकै छन् ।
नेपाली भि`डियो क्रि`यटर्स नामक युटुबमा शिशिर र उनको श्रमिती रमाईला सामग्रीहरु बनाउँछन् । त्यसो त शिशिर आफ्नो २० लाख हाराहारी सव्सक्रा`ईभर्स भएको च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल`बाट सामा`जिक तथा साँगीतिक कामहरु र अन्य अन्त`र्वार्ता सामग्रीहरु प्रस्तु गर्दै आईरहेकै छन् । शिशिर र उनको श्रीमतको यो सबैले रुचाएको भि`डियो हेर्नुस
Prevखुशीको खबर: आज नेपालमा एकैदिन यति धेरै जनाले जिते कोरोना !
Nextदुवै खुट्टा चल्दैनन् , ५० वर्षमा हिम्मत जोस भने हराको छैन , आज टिकटकमा भाइरल बन्यो उहाँका (भिडियो )
आज बढ्यो सुनको मुल्य ,तोलामा यति पुग्यो हेर्नुहोस।